DAAWO: Cabdiweli Gaas “Qofka Puntland Madaxweyne ka ah naar buu ku jiraa” – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
DAAWO: Cabdiweli Gaas “Qofka Puntland Madaxweyne ka ah naar buu ku jiraa”
January 10, 2022 Xuseen 10
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya, ahna Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, ayaa sheegay in qofka Madaxweyne ka noqdaa Puntland uu lamid yahay qof naar ku jira.
Cabdiweli Gaas oo wareysi siiyay SBC TV, ayaa xusay in Madaxweynaha Puntland uu had iyo jeer dhex jiro shido, sida beelo diriray, ciidammo gadooday iyo dagaalo dhacay, taas oo sababta in uu waayo hurdo fiican, isagoo intaas sii raaciyay in nolasha gaarka ah ay ka wanaagsan tahay.
“Qofka Puntland Madaxweyne ka ah naar buu ku jiraa, waa cadaab, hurdo fiican ma helaysid, Askar ayaa gadooday, dagaal baa dhacay, laba qoys ayaa is laayay, yacni waa qof ku jira shido. Haddii aan runta kuu sheego, nolosha gaarka ah waa nolol wanaagsan”.
Sidoo kale, Waxaa uu sheegay inay qofkaas sugayso tii Aakhiro, uuna isagu is leeyahy is daba qabo, maadama waqti badan uu meelo kale uga soo lumay.
“Nolashu ma ahan adduunka oo kaliya, Aakhirana waa dambaysaa, shaqo badan baa na sugaysa, waxaan is leeyahay waqti badan baa meela kale kaaga lumay ee bal is daba qabo”.
Haye, kuwa aniga igu colaadiya in aan runta iyo xaqa kasheego waxa Puntland ka jira, maxay ka oran doonaan in uu Cabdi Weli Gaas aragtidayda iyo dareenkayga asiibay oo ilawadaago?
Mise isagu waa reer Mudug oo ka dabahadal maleh?
Naqdin ka xun oo uu nin kuqaniinay bulsho iyo dhul uu madaxweyne ka noqday oo kuna abtirsado abid imasoomarin – Siyaad Barre kasokow.
Runtiina, dal iyo dadkiisaba nacab uga xun majiro kuwa iskaga guulwadeeya ee wixii ka qaldanba dusha ka dada. Sidoo kale, majiro gacal uga sokeeya kuwa nusqaamaha iyo iimaha jira shaaca ka qaada oo toosna unaqdiya.
C/weli Haas arrin qadaf ah ayuu sheegay,waana Ku ceeb intu shacabka Puntland ka shaqaystay inu dhaho cidda xukuntaa waa cadaabtii qof Ku jira.
Bal isweydiiyoo shacab masuulka xukuma la xisaabtama oo uu dhibsado ma yihiin?
-Ma yihiin duul u xor ah dhaliisha masuulka xukuma oo intaa shaashadaha la taagnaa waa tuug,waa waxma tare,waxba nooma qaban,wuu na boobay iwm?
-Maba aha shacab dhib leh,mana yaqaañaan xuquuqdooda e maxay eersadeen?
Waa shacab iska hurda,aad iska maamulanayso,aad musuqayso,xadayso,Ku baashaalayso woxooda yarka ah,kuna oranayn waxba oo iska qabow,mana u malaynayo inay jirto meel mucaaradad la’aan,xisaabtan la’aan heerkaas ah ka jirto Somaliya.
Dad nin u taliyay iyo nin tuugsadaa ugu aqoon badan.
Reer Mudug runta kama leexdaan.
Armaa hogaan xumo u sababtahay dib u dhaca iyo hagaaska dawladnimo ee Puntland ka muuqdo 21 sano kadib.
Shacabka aad baabi’iseen miyaad waliba eedaysaan?
Wax xun ma uusan sheegin, markuu lahaa inaad puntland maamusha waa cadaab, micnaheedu waa culayska masuuliyadda ku saaran, waxaana lagu fasiri karaa waxyaalo badan, kuwa xumaanta u rogaya hadalkaas waa kuwii awalba cuqdada qabay ee shurunshuurta ahaa wax ka sooqaad malaha eeddoda iyo nacnacdoooda, gaas shaqo fiican ayuu puntland ka qabtay iyo federaalkaba waana ku mahadsanyahay. Ina gayllan nin xanuunsan ayaa tahay sxb hagaaji sawirka madaxweynaha inaad sawirkiisa suurad xumayso waxbo kuma yeeli kartid lkn calooshaada bukto ayeey sawir xun ka bixinaynaa awalba shurunshuur iyo sangur ayaad ahayd iyadii ayaad isku caddaysay.
Walee Gaas dhibaato waa kala kulmay reer puntland. Kursi lagula fariisto iyo isbaaro la hordhigto madatooyada.
Intaas waxaa uu dheeraa xaqiraad iyo eedeyn aan sal lahayn oo wali laga daba wado.
Yaaba ilaabi kara ciidamadii gadoodi jirey ee inkiri jirey mushaarkii la siin jirey. Iyo ciidamo beeleedkii usoo xaadiri jirey mushaar dawladeed oo gardarada loo masruufi jirey.
Inkasoo uu marxaladaas ku jirey Mr Gas waxuu dhisay labo eeroboor oo caalami ah. Waxuu suxulka u mutay dakada garac. Waxuu boosaaso iyo garoowe ka wada dhigay laami casriyerysan oo bilicdii magaalooyinkaas ka dhigay manshaAllah. Waxuu dhagax dhigay oo kharsha badan ku bixiyey wadada ceel dahir/ceeragaabo iyo mashruucyadii farahs badnaa ee uu ka fuliyey Sanaag. Dakada boosaaso’na waxaa tafaha qabsaday dadkii dagaanka oo uu dakadii ka hirgalin waayey. Magaaladii ee uu ku dhashay ee gaalgacyo wax dhaxalgal ah kamuusan qaban, isagoo ka cararaya in farta lagu fiiqo oo qabyaalad lagu eedeeyo. Tan ugu darnayd waxay ahayd in si gunnimo ah loo uagaarsaday oo loo la laayey ehelkiisa iyo xigtadiisa hoose, kuwaas oo shuqul iyo shaqo ku lahayn dawlada iyo siyaasada puntland.
Nin intaas oo kalif ah la kulmay waa xaqiiqo in uu ahaa nin cadaab la kulmay.
Madax salaaxii Mr Gas ayeey reer puntland ku qooqeen oo waxay rabaan in Deni isna madaxa u salaaxo oo siiyo beesadii baada ahayd ee Gas bixin jirey. Kuwa had Deni tafaha haysta waxay ka daba ooyayaan beesadii baada ahayd ee Gas lagu khasbi jirey si isbaarooyinka looga hor qaado.
Siil gus u bartay kaaley oo aamusi.
Afkiisa iyo ficilkiisa qofka inay is waafaqaan baa fiican, hadii Gaas aakhiro rumaysan yahay, dekedii Boosaaso maalin cad jeebka kuma shubteen lacagteedii, wadadii Garoowe iyo Gaalkacyo u dhaxaysa sidaas oo kale ma dhaceen.
Musuqmaasuq iyo Gaas, Farmaajo iyo Xasan Sheekh Maxamud waa wada dhasheen.
Wax madaxwayne reer Puntland wa dad nasaba oo dulqaad badan lkn ma helin madax u qalanta wa shacab bisil wayo wa shacabka ay isaga danbeeyeen faroole adiga iyo Dani oo ugu danbayn dhiigoodii daadiyey
Dadkaas waxay mudan yihiin sharaf ee alle hogamiye fican ha siiyo
dadku intay dowladnimada fahmayaan kuma filna 20 sano wakhti ku siman xaqiiqatan waxa weye dadku waa bulshada inteeda badan waa bulsho qabali ah kuna hanaqaaday qabiil iyo fahamka dowladnimada oo ka qaldan. bil xaqiiqa waxa weye Puntland hogaamiyeyaashii soo maray mawada xumayn mana wada hagaagsanayn intii dhimatay Allah how naxariisto inta
noolna Allah ha xifdiyo. waxaan aaminsanahay madaxdii soo martay Puntland dhamaantood inay soo qabteen shaqooyin muhiim ah midwalbaana marxaladiisa iyo waayihiisu haysteen.
Af labo daan leh hadal ma daayo!
Gaas ma markuu xoogaagii meesha yaalay ka xaabsaday buu warkaas keenay! Nin looga hanwaynaa majidhinin maalintii la doortay, wuxuu olalaha kusoo galayna waa ogayn, maalintuu xilka katagyna meeshii uu puntland dhigay ilaa hada kasoo kaban la dahay!